Zimbabwe tour of Pakistan 2015 - match reports, news, live scores
Australia tour of West Indies 2015
Australia ODI tour of England, Ireland 2015
ICC World T20 Qualifier 2015
New Zealand Women tour of India 2015
South Africa tour of Bangladesh 2015
West Indies Women tour of Sri Lanka 2015
Zimbabwe tour of Pakistan 2015
Zimbabwe tour Pakistan to play two Twenty20 Internationals and three One-Day Internationals as they become the first full international team to play in Pakistan since 2009.
Rain abandons third ODI with Pakistan winning the series 2-0
Persistent rain caused the third One-Day International between Zimbabwe and Pakistan at the Gaddafi Stadium to be abandoned allowing Pakistan to take the series 2-0.
Analysing Pakistan hosting cricket again
International cricket returned to Pakistan for the first time in six years when Pakistan hosted Zimbabwe in a series of Twenty20 and One-Day Internationals amid tight security. Jibran Khan Niazi assesses this revival.
Two-Match Ban For Elton Chigumbura
Zimbabwe skipper Elton Chigumbura has been banned for the next two One-Day Internationals against Pakistan for slow over-rate during the previous ODI in Lahore on Tuesday.
Pakistan Wins A High Scoring Fest To Resist A Spirited Zimbabwe
Shoaib Malik scored a sensational century to help Pakistan win the first game of the three match One-Day International series against Zimbabwe by 41 runs at the Gaddafi Stadium in Lahore.
Pakistan Hold Nerve To Clinch A Tight Game Against Zimbabwe
Mukhtar Ahmed scored a second successive half century to ensure Pakistan chased down a stiff target of 176 in the last over to win both games of the two match Twenty20 International series against Zimbabwe at the Gaddafi Stadium in Lahore.
Mukhtar Ahmed Fires Pakistan To A Win Against Zimbabwe
Mohammad Sami got three wickets on comeback and Mukhtar Ahmed smacked 83 as Pakistan defeated Zimbabwe by five wickets chasing down 172 at the Gaddafi Stadium in Lahore in the first international game played in Pakistan after six years.
Shahid Afridi Hopes For More Cricket In Pakistan
Dynamic all-rounder Shahid Afridi sounded optimistic of international cricket returning to Pakistan permanently after the home series against Zimbabwe which begins on Thursday.
No ICC Umpires For Pakistan Tour
The International Cricket Council (ICC) has announced that it will not be sending umpires for Zimbabwe’s tour of Pakistan due to security concerns.
Zimbabwe Considering Pakistan Tour
Zimbabwe are set to give a go ahead to their tour of Pakistan next month which will be the first visit by a full-member nation to the country since 2009.
Zimbabwe's Pakistan Tour Confirmed
Pakistan are set to host their first series at home since 2009 with Zimbabwe set to visit them next month for a five-match One-Day International series.
Pakistan Likely To Host Zimbabwe
In a decision that will hugely boost cricket in their country, the Pakistan Cricket Board (PCB) has chalked up a plan to host Zimbabwe for a series next month.